Shiineesku wuxuu hubiyaa fiilada badbaadada oo leh soosaarayaasha baadiyaha naxaasta ah iyo alaab-qeybiyeyaasha | Linhui Hardware
Lanyard gariiradda guga
Xargaha gacmaha ee ka hortagga lumay ee ilmaha
astaysto Xargaha siliga birta
iibka kulul ee Amazon
Silsilad aan qarxin ka hortagtaa Jeegaga Hose Cable Choker
Tuubbada Qalabka Waxay hubisaa badbaadada tuubada hawada
Biraha Aan Lahayn304 iyo 316 Whipcheck badbaadada dharbaaxada
karbaash hubi fiilada badbaadada leh baadiyaha naxaasta ah
xajin la go'i karo oo ka shaqaynaysa agagaarka hydrau cadaadis-sare...
Hal Ilaha Jiid Nooca Cable-ka
Hose Hobbles Chokers Birta Cas
Xarig xadhig leh oo leh xadhig siligga badbaadada Clips
Jeegaga garaaca - dharbaaxada badbaadada ayaa ah badbaado togan - waardiyeeya isku xirka tuubooyinka. Xadhkaha birta ah ee xoogga leh waxay ka hortagaan tuubada tuubada haddii ay dhacdo kala go'a isku-xidhka ama qalabka isku-xidhka si lama filaan ah.
Jeeshka garaaca - dharbaaxada badbaadada ayaa ah badbaado togan - waardiyeeya isku xirka tuubooyinka. Xadhkaha birta ah ee xoogga leh waxay ka hortagaan tuubada tuubada haddii ay dhacdo kala go'a isku-xidhka ama qalabka isku-xidhka si lama filaan ah. Jeegaga garaaca ee tuubada ayay gaartaa si ay u bixiso badbaadada tuubada. Silsilooyinka guga ku raran fiilada ayaa si fudud u furma si ay uga gudbaan isku xirayaasha si ay si adag ugu qabsadaan tuubada, sida muuqata. Waxa si fiican loogu tijaabiyay sanado adeeg.
Waxaa jira qiyaaso kala duwan oo jeegaga karbaasha ah oo ay samaysay LH. Dhammaan agabka loo isticmaalo habka wax-soo-saarka waxay waafaqsan yihiin heerarka SABS & ISO, Qalabka waa fiilada, ferrules ect.
Sidee buu u shaqeeyaa Hose?
Marka kala soocitaan aan ula kac ahayn ay dhacdo, waxaa sabab u ah hawo ciriiri ah ama dareere ku urursan tuubada. Marka tani dhacdo, tuubada ayaa si cadho leh u garaaci doonta sababtoo ah cadaadiska la dhisay. Isticmaalka qalabka, tuubada karbaashku ma dhacayso - fiilada birta ah ee adag ee galvanized waxay caawisaa inay ka hortagto karbaash iyada oo loo marayo wareegyada gu'ga ee si fudud loo raray, kaas oo si adag oo adag u qabsanaya tuubada.
Goorma ayaan u baahanahay inaan isticmaalo Whipcheck?
A waxaa lagu isticmaali karaa tuubo ama qalliin kale oo cadaadis sare leh oo hawo ama dareere cadaadis leh oo dhex mara. Waxaa laga heli karaa codsiyada sida qodista dhuxusha, beerista iyo beerista.
magaca alaabta cabbirka Qalab Dhexroorka xadhigga xadhigga (mm) Dhererka guud (mm) dhererka gu'gaMM) Dhexroorka guga (mm) Dhumucda guga (mm) Cabbirka dhexroorka tuubada ku habboon Awood wax burburisa(KG)
karbaash 3/16" *28" Birta kaarboonka galvanized 5 710 240 18 2.0 1/2 "-2" 1400
Dhismaha alaabta iyo tijaabinta
3/16" * 28", Waxaa laga soo saaray 5mm xadhig bir galvanized galvanized xadhig silig ilaa culays badbaado leh oo 1.5 tan ah.
Fiilooyin Badbaadada ah ayaa lagu heli karaa laba dhexroor oo fiilada ah iyo tiro habayn oo kala duwan. u fidiyaan badbaado dheeraad ah tuubooyinka kombaresarada ee meelaha kuxiran ama muhiimka ah.
Fiilada badbaadada karbaash waxaa loo qaabeeyey si gaar ah si looga ilaaliyo isku xirka tuubooyinka karbaashka haddii tuubooyinka ama isku xirayaasha ay ku guuldareystaan ​​inay qabtaan. Guuldarradu waxay badanaa ku timaadaa cadaadis sare waxayna ka dhigi doontaa tuubooyinka ama qalabka si xoog leh u ruxma taas oo keeni karta dhaawac halis ah dadka ama isku-xidhka & qalabka u dhow.
Hore: hal xajin Nidaamka xakamaynta badbaadada ee tuubooyinka cadaadiska
Xiga: Biraha Aan Lahayn304 iyo 316 Whipcheck badbaadada dharbaaxada
Xakamaynta Tuubada Hawada
Jeegaga Jeegaga Xakamaynta Khadka Socodka
Hose to Hose Whipchecks
Jeegajyada Tuubbada Qalabka
Xakamaynta Tuubada Haydarooliga
Xakamaynta Tuubooyinka Biyaha
Hose to Hose Whipchecks fiilada badbaadada
hal xajin oo ah nidaamka xakamaynta badbaadada ee pres...
Nidaamka xakamaynta karbaashka tuubada oo leh labajibbaaran
Yuyao City Linhui Caagagga Hardware Warshada